सौराहामा ‘पर्यटन सूचना केन्द्र’ स्थापना हुने — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पर्यटन > सौराहामा ‘पर्यटन सूचना केन्द्र’ स्थापना हुने
चितवन । नेपालकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवनको सौराहामा एक करोड ३१ लाखको लागतमा सुविधायुक्त ‘पर्यटन सूचना केन्द्र’ स्थापना हुने भएको छ ।
पर्यटन विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कोषनाथ अधिकारीका अनुसरा सूचना केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्कासमेत भइसकेको र स्थान छनोट भएपछि काम सुरुवात हुनेछ । पर्यटन विभागमार्फत बजेट परिचालन हुने गरी केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया थालिएको उनले बताए ।
पर्यटन सूचना केन्द्रको अभावले चितवन आएका पर्यटक उचित सूचना नपाउँदा प्रभावित हुँदै आएका छन् । सूचना केन्द्रका लागि सौराहा बसपार्क क्षेत्र र राप्ती किनारको निकुञ्ज छेउको क्षेत्र छनोट भएको छ । दुई स्थानमध्ये कुन ठाउँमा निर्माण गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेकाले फिल्डको काम तत्काल सुरु गर्न सकिएको छैन ।
क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका महासचिव राममणि खनालले पर्यटन प्रहरीको निगरानी रहने गरी सुविधायुक्त सूचना केन्द्र निर्माण गरिने बताए । उनले पर्यटकका लागि चाहिने जानकारी, वन र वन्यजन्तुका गतिविधि, आनिबानी, नेपालका पर्यटकीय क्षेत्र र चितवनको पर्यटकीय गन्तव्य, भौगोलिक अवस्था तथा सांस्कृति पहिचान सबै कुरा सूचना केन्द्रमा राखिने बताए । पर्यटक आएपछि कसैलाई सोधिरहनु नपर्ने गरी केन्द्र निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । पर्यटन विभागबाट यसवर्ष सूचना केन्द्रसहित बसपार्क स्तरोन्नति, सोलार बत्ती तथा अन्य विभिन्न विकासका काममा सहयोग भएको पर्यटन व्यवसायी जीतु तामाङले जानकारी दिए । गुरुयोजना निर्माणका लागिसमेत बजेट माग भएको क्षेत्रीय होटल संघले जानकारी दिएको छ ।
नेपालको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यमा रहेको सौराहामा दैनिक दुई हजार ५ सय पर्यटक बस्न मिल्ने क्षमता भए पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नहुँदा र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी हुन नसक्दा पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन सकिएको छैन ।
२०७३ भदौ १३ गते १९:४५ मा प्रकाशित
नियुक्त हुनासाथ पर्यटन मन्त्रीहरु विमानस्थल किन पुग्छन् ?
लाइन काटिन थालेपछि धमाधम बक्यौता रकम तिर्दै
१५०% हकप्रद सेयर बिक्री गर्न एनएमबिले पायो अनुमति
धरहरा बनाउनका लागि सेनाले दियो सवा ६ करोड !
मूल्य बृद्धि ९ प्रतिशतले बढ्दैछ : राष्ट्र बैंक